Araraoty ilay Onja - Russell M. Nelson
Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson
Misaotra an’Andriamanitra sy i Jesoa Kristy Zanany lahy aho noho ny Famerenana amin’ny laoniny sy ny hery ao amin’izany izay manosika onjam-pahamarinana sy fahitsiana mahatalanjona izay manenika ny tany.
Ry rahalahy sy anabavy malala isany, miombon-kevitra amin’ny Filoha Thomas S. Monson sy ireo hafa aho midera an’ireo izay namaly ny fangatahan’ny mpaminany misiônera mendrika maromaro kokoa. Ankehitriny dia misy onjam-pientanentanana tsy misy ohatr’izany mikasika ny asa fitoriana, izay miparitaka manerana ny tany. Hatramin’ilay fanambarana manan-tantara nataon’ny Filoha Monson tamin’ny Ôktôbra farany teo dia elder sy rahavavy ary mpivady zokiolona an’arivony no voantso ary mbola maro noho izany no eo am-piomanana.1 Ankehitriny dia anontanian’ny olona izahay hoe: “Hataonareo inona daholo izao ireo misiônera ireo?” Tsotra ny valiny. Ny efa nataon’ny misiônera hatramin’izay no hataon’izy ireo. Hitory filazantsara izy ireo! Hitahy ireo zanak’Andriamanitra Tsitoha!
Maro aminareo ry zatovolahy sy zatovovavy isany no hanararaotra izany onja izany raha miezaka ny ho mendrika ny antso ho misiônera. Hitanao toy ny fipariahan’ny fahamarinana sy ny fahitsiana izany. Hitanao ny fahafahanao mandray anjara tanteraka amin’izany fipariahana izany.
Ianareo ry zatovo, ekeo ary araho ilay fandaharam-pampianarana vaovao ho anareo, ary mifampianara ny fotopampianaran’i Jesoa Kristy. Izao no fotoana hiomananareo hampianatra ny hafa mikasika ny fahatsaran’Andriamanitra.
Ry zatovolahy sy zatovovavy isany, manan-danja mandrakariva ny fianarana ataonareo—aminay sy aminareo ary amin’Andriamanitra. Raha azo atao, ary raha tianao ny hianatra any amin’ny oniversite aorian’ ny asa fitorianao, dia mamporisika anao izahay hisoratra anarana amin’izay toeram-pampianarana nosafidianao alohan’ny hanombohan’ny asa fitorianao. Maro ny toeram-pampianarana ambony no manaiky ny hanemorana 18 ka hatramin’ny 30 volana ny fotoana tena hidirana mianatra ho an’ny olona iray handeha hitory filazantsara. Izany dia hahafahanao manompo ka tsy hiahiahy ny amin’izay toerana hanombohanao ny fianarana ambony horantovinao. Tena feno fankasitrahana izahay ho an’ireo lehiben’ny toeram-pampianarana izay manao izay ahafahana manatanteraka izany!
Ianareo ray aman-dreny sy mpampianatra ary ny hafa, araraoty ilay onja eo am-panomananao ny taranaka vao misondrotra mba ho mendrika hanao asa fitoriana. Mandritra izany fotoana izany dia hanintona ny sain’ireo namana sy mpiray vodirindrina aminao ny fiainanao mendrika halain-tahaka. Mivonòna hamaly ireo izay manontany ny antony mahatonga anao hanana fiainana toy izany. Mivonòna hanome ny antony mahatonga ilay fanantenana sy fifaliana izay hitany eny aminao.2 Rehefa mipetraka ny fanontaniana toy izany dia azonao atao ny mamaly hoe: “Anontanio ireo misiônera! Afaka manampy antsika izy ireny! Ary raha tianao dia ho eo anilanao aho rehefa hamaly sy hampianatra anao ireo misiônera.”
Ianareo ry olon-dehibe, araraoty ilay onja amin’ny alalan’ny fanampiana eo amin’ny fiomanan’ireo izay ho misiônera eo amin’ny ara-panahy sy ara-batana ary ara-bola. Zary ho lasa mandeha ho azy aminao ny manangom-bola ho amin’izany. Ianareo ry mpivady zokinjokiny, miomana ho an’ny fotoana ahafahanareo mandeha manao asa fitoriana ianareo. Ho velom-pankasitrahana indrindra izahay noho ny fanompoanareo. Mandra-pahatongan’izany dia angamba azonao atao ny mampiasa ny volanao hanohanana ny asa fitoriana amin’ny alalan’ny fandrotsahana ao amin’ny Kitapom-bola Faobe ho an’ny Asa Fitoriana, araka ny sosokevitra naverin’ny Filoha Monson naroso aninkeheo maraina.3